Umanyano | Law & More B.V.
ENetherlands isibonelelo semali ligalelo lezemali kwiindleko zokuphila kweqabane lakho langaphambili kunye nabantwana emva koqhawulo mtshato. Yimali oyifumanayo okanye ekufuneka uyihlawule ngenyanga. Ukuba awunayo ingeniso eyoneleyo onokuphila ngayo, unokufumana isondlo. Kuya kufuneka uhlawule isibonelelo semali ukuba iqabane lakho langaphambili alinayo imali eyoneleyo yokuzixhasa emva koqhawulo-mtshato. Umgangatho wokuphila ngexesha lomtshato uyakuthathelwa ingqalelo. Unokuba noxanduva lokuxhasa iqabane lakho langaphambili, obhalise ngaphambili kunye nabantwana bakho.
I-alimony yomntwana kunye ne-alimony yeqabane
Kwimeko yoqhawulo-mtshato, unokujamelana ne-alimony yeqabane kunye ne-alimony yomntwana. Ngokumalunga ne-alimony yeqabane, unokwenza izivumelwano malunga noku kunye neqabane lakho langaphambili. Ezi zivumelwano zingabekwa kwisivumelwano esibhaliweyo ligqwetha okanye i-notary. Ukuba akukho nto kuvunyelwene ngayo kwi-alimony yeqabane ngexesha loqhawulo-mtshato, unokufaka isicelo senkxaso-mali kamva ukuba, umzekelo, imeko yakho okanye yeqabane lakho langaphambili litshintsha. Nokuba ulungiselelo lwesondlo esele lukhona alusasebenzi, unokwenza amalungiselelo amatsha.
Ngokumalunga ne-alimony yomntwana, zinokwenziwa nezivumelwano ngexesha loqhawulo-mtshato. Ezi zivumelwano zibekwe kwisicwangciso sokuba ngumzali. Kwesi sicwangciso uyakwenza amalungiselelo okwabiwa kokhathalelo lomntwana wakho. Olunye ulwazi malunga nesi sicwangciso lunokufumaneka kwiphepha lethu malunga isicwangciso sokuba ngumzali. Isondlo somntwana asiyeki de umntwana afike kwiminyaka engama-21. Kungenzeka ukuba isondlo siyanqunyanyiswa ngaphambi kweli xesha, okt ukuba umntwana uzimele geqe kwezemali okanye unomsebenzi ubuncinci umvuzo omncinci wolutsha. Umzali okhathalayo ufumana inkxaso yomntwana ade umntwana afike kwiminyaka eyi-18. Emva koko, isixa siya ngqo emntwaneni ukuba uxanduva lwesondlo luhlala ixesha elide. Ukuba wena neqabane lakho langaphambili aniphumelelanga ukufikelela kwisivumelwano ngenkxaso yomntwana, inkundla ingathatha isigqibo ngamalungiselelo esondlo.
Uyibala njani imali yesondlo?
I-Alimony ibalwa ngokwamandla omntu onetyala kunye neemfuno zomntu onelungelo lokugcinwa. Umthamo sisixa-mali somhlawuli wesondlo esinokusindisa. Xa zombini isonyonyelo lomntwana kunye neqabane lokuxhasa umntwana lifakwa, inkxaso yomntwana ihlala ihamba phambili. Oku kuthetha ukuba isondlo somntwana sibalwa kuqala kwaye, ukuba kukho indawo yaso emva koko, iqabane lomlingane lingabalwa. Unelungelo lokufumana isondlo kwiqabane lakho ukuba utshatile okanye kwiqabane elibhalisiweyo. Kwimeko yesondlo somntwana, ubudlelwane phakathi kwabazali abunamsebenzi, nokuba abazali bebengekho kubudlelwane, ilungelo lomntwana lokufumana umntwana likhona.
Ixabiso leAlimony liyatshintsha minyaka le, kuba umvuzo nawo uyatshintsha. Oku kubizwa ngokuba kukufakwa kwisalathiso. Unyaka ngamnye, ipesenti yesalathiso isetwa nguMphathiswa Wezobulungisa Nokhuseleko, emva kokubala yi-Statistics Netherlands (CBS). I-CBS ibeka iliso kwinkqubela phambili yomvuzo kushishino, kurhulumente nakwamanye amacandelo. Ngenxa yoko, imali yesondlo inyuka ngepesenti qho ngonyaka nge-1 kaJanuwari. Unokuvumelana kunye ukuba isalathiso esisemthethweni asisebenzi kwisondlo sakho.
Unelungelo lokufumana isondlo ixesha elingakanani?
Unokuvumelana neqabane lakho ukuba intlawulo yesondlo iya kuqhubeka ixesha elingakanani. Unokucela inkundla ukuba isete umda wexesha. Ukuba akukho nto kuvunyelwene ngayo, umthetho uya kulawula ukuba kufuneka ihlawulwe ixesha elingakanani isondlo. Ummiselo wangoku wezomthetho uthetha ukuba ixesha lesondlo lilingana nesiqingatha sexesha lomtshato ubuninzi beminyaka emi-5. Kukho amanani okwahlukileyo koku:
Ukuba, ngexesha lokufakwa kwesicelo soqhawulo-mtshato, ubude bomtshato budlula iminyaka eli-15 kwaye ubudala bomntu obolekwa ngemali yesondlo akukho ngaphezulu kweminyaka eli-10 ubudala kuneminyaka yobudala yomhlala-phantsi esebenzayo ngelo xesha, uxanduva luya kuphela xa iminyaka yobudala yomhlala-phantsi iyafikelelwa. Lo ke yiminyaka eli-10 ubuninzi ukuba umntu ochaphazelekayo unguye kanye kwiminyaka eli-10 phambi kobudala bepenshini karhulumente ngexesha loqhawulo-mtshato. Ukumiswa kwexesha lobudala bepenshini kurhulumente emva koko akuchaphazeli ixesha lesibophelelo. Oku kukhethwa kusebenza ke kwimitshato yexesha elide.
Ukhetho lwesibini luchaphazela iintsapho ezinabantwana abancinci. Kule meko, uxanduva luyaqhubeka de umntwana omncinci ozelwe emtshatweni afike kwiminyaka eyi-12. Oku kuthetha ukuba isondlo sinokuhlala iminyaka eli-12.
Ukhetho lwesithathu lulungiselelo lotshintsho kwaye lwandisa ixesha lolondolozo lwababolekisi abanesondlo abaneminyaka engama-50 nangaphezulu ukuba umtshato uhleli iminyaka eli-15 ubuncinci. Ababolekisi bokugcina abazalwe ngomhla okanye phambi komhla woku-1 kuJanuwari 1970 baya kufumana isondlo seminyaka eli-10 ubuninzi endaweni yeminyaka emi-5 ubuninzi.
I-Alimony iqala xa umthetho wokuqhawula umtshato ungenisiwe kwiirekhodi zobume boluntu. UAlimony uyayeka xa ixesha elimiselwe yinkundla liphelile. Iyaphela xa umamkeli ephinda etshata, ehlalisana okanye engena kubambiswano olubhalisiweyo. Xa elinye lamaqela liswelekile, intlawulo yesondlo iyayeka.
Ngamanye amaxesha, iqabane langaphambili linokucela inkundla ukuba yongeze imali. Oku kunokwenziwa kuphela kude kube nge-1 Januwari 2020 ukuba ukupheliswa kwesondlo kufikelela kude kangangokuba akunakufuneka ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Ukusukela nge-1 kaJanuwari 2020, le mithetho yenziwe ukuba ibe bhetyebhetye ngakumbi: i-alimony ngoku inokongezwa ukuba ukupheliswa akunangqondo kwiqela elamkelayo.
Inkqubo ingaqalwa ukumisela, ukuguqula okanye ukuphelisa isondlo. Uya kuhlala ufuna igqwetha. Inyathelo lokuqala kukufaka ifayile yesicelo. Kule sicelo, ucela ijaji ukuba ichonge, iguqule okanye imise ulondolozo. Igqwetha lakho lizoba esi sicelo lize lisingenise kwirejistri yenkundla yesithili apho uhlala khona nalapho ityala liqhubeka khona. Ngaba wena neqabane lakho langaphambili alihlali eNetherlands? Emva koko isicelo siya kuthunyelwa kwinkundla yaseHague. Umlingane wakho wangaphambili uya kufumana ikopi. Njengenyathelo lesibini, iqabane lakho langaphambili linethuba lokungenisa ingxelo yokuzikhusela. Kolu khuselo angachaza ukuba kutheni isondlo singenakho ukuhlawulwa, okanye ukuba kutheni isondlo singenakulungiswa okanye simiswe. Kwimeko apho kuya kubakho ukuxoxwa kwenkundla apho bobabini abalingani banokubalisa ibali labo. Emva koko, inkundla iya kuthatha isigqibo. Ukuba elinye lamaqela liyaphikisana nesigqibo senkundla, linakho ukubhena kwinkundla yezibheno. Kwimeko enjalo, igqwetha lakho liya kuthumela esinye isikhalazo kwaye ityala liyakuvavanywa ngokupheleleyo yinkundla. Uya kunikwa esinye isigqibo. Ungabhenela kwiNkundla ePhakamileyo ukuba awuphikisani nesigqibo senkundla. INkundla ePhakamileyo ivavanya kuphela ukuba ingaba iNkundla yeziBheno iwutolikile kwaye yawusebenzisa umthetho kunye nemigaqo yenkqubo ngokufanelekileyo nokuba isigqibo seNkundla sisekwe ngokwaneleyo na. Ke ngoko, iNkundla ePhakamileyo ayiqwalaseli ngokutsha imeko yeli tyala.
Ngaba unemibuzo malunga ne-alimony okanye ngaba ufuna ukufaka isicelo, utshintshe okanye umise isondlo? Ke nceda unxibelelane namagqwetha osapho ka Law & More. Amagqwetha ethu akhethekileyo kwi (re) kubalo lwesondlo. Ukongeza, sinokukunceda nakweyiphi na inkqubo yenkxaso-mali. Amagqwetha Law & More ziingcali kwicandelo lomthetho wosapho kwaye bayakuvuyela ukukukhokela, mhlawumbi kunye neqabane lakho, kule nkqubo.
Post edlulileyo Inkqubo yokubuza kwiGumbi leShishini
Post Next Ukwala umsebenzi